एमसीसी विवाद प्रचण्डले गिजोलेको गोकुल बास्कोटाको आरोप Canada Nepal
एमसीसी विवाद प्रचण्डले गिजोलेको गोकुल बास्कोटाको आरोप
काठमाडौं - नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले एमसीसी विवाद नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गिजोलेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बास्कोटाले सो कुरा बताएका हुन् । प्रचण्डले नै एमसीसी गिजोलेको बताउदै उनले वैदेशिक सहायता मजाकको कुरा हो भनि प्रश्न गरे । उनले भने - 'एमसीसी गिजोलेको प्रचण्डले मात्रै हो । सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्छन् । वैदेशिक सहायता मजाकको कुरा हो ?'
उनले थपे - 'एमाले सरकार हुँदा संसदमा पेस गर्ने भनेका थियौं । रोकेको सभामुखले होइन रु कुनै पनि देशसँग पुँजी र प्रविधि सहयोग लिन सकिन्छ । तर स्वाधीनता र संविधानमाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन ।'
उनले माधवकुमार नेपाललाई घाम उदायपछि सुकेर जाने शीतको संज्ञा पनि दिएका छन् । माधव नेपाल एमालेको अवैध सन्तान भएको भन्दै बास्कोटाले एमाले फुटेको नभई काँचुली फेरेको बताए । उनले भने - 'एमाले फुटेको होइन, काँचुली फेरेको हो । हरेक वसन्तमा नयाँ पात पलाउँछ । एमालेबाट केही मान्छे गए, हामीले काँचुली फेर्‍यौं'
उनले थपे - 'कसैलाई एमालेको नाम सुन्दा नाक छोप्नुपर्ने भएको छ रे । माधव नेपाल त्यसो भए माधव नेपाल अवैध सन्तान हुन् रु आफैलाई जन्माएको बाउआमा नचिन्ने कुपुत्र हुन् ?'
आश्विन ५, २०७८ मंगलवार १४:३२:१७ बजे : प्रकाशित